Matongerwo eNyika, 13 Ndira 2021
Chitatu 13 Ndira 2021
Hopewell Chin’ono asvitsawo chikumbiro chekuti atongwe achibva kumba asi chikumbiro ichi changa chichipikiswa nemuchuchisi wenyaya iyi, Amai Nancy Chandakaona. Dare richapa mutongo waro pachikumbiro ichi nemusi weChina.
Muzvare Rushwaya Vanopihwa Mukana weKubvisa Mari yeChibatiso
Vakambomiswa basa semutungamiri weZimbabwe Miners Federation, Muzvare Henrietta Rushwaya, avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo, vapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Kubviswa kwaVaDonald Trump paChigaro Kwotsviriridza muAmerica
Dare re House of Representatives riri pakati pehurongwa hwekumisa basa nekusungisa mutungamiri weAmetica, VaDonald Trump, nemhosva yekukonzeresa mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill svondo rapera.
African Union Yowana Nhomba yeCovid-19 Apo Chirwere Ichi Chouraya Vakawanda
Chipangamazano munyaya dzezvehutano mubazi reAfrica Centers for Disease Control and Prevention, Dr Nicaise Ndembi, vanoti African Union yakwanisa kuwana nhomba yeCivod-19 inosvika mamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million ichashandiswa mukudzivira kupararira kwechirwere ichi.
Nyanzvi yezveMutemo Yotsanangura Zvinoreva Miutemo weBritain Unorambidza Vashanyi Vanobva kuZimbabwe neDzimwe Nyika
Doctor Mavaza vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvagara zviine mabasa azvo kana kudzidza muBritain, uye zvine magwaro ekuzvarwa enyika mbiri idzi zvakabatwa nemutemo uyu zviri kunze kweBritain zvinokwanisa kudzokera zvisina dambudziko.
Hurumende Yoyambirwa Kusadhinda Mari Itsva Yakawandisa
Muzvinafundo Mugano vanoti hurumende haifanire kubva yadhinda mari yakawandisa nekuti zvinogona kukonzera matambudziko ekushaya simba kwemari iyi.
Vanotengesa Mumigwagwa Votaura neHurumende Kuti Vabatsirwewo Munguva yeKuvharwa kweNyika
Sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa, reVendors Initiative for Social Transformation, VISET, rinoti rinotarisira kuti rwendo rwuno hurumende ichabatsirawo nhengo dzaro nemari munguva ino yadzisiri kukwanisa kushanda nekuda kwemutemo wekumbovharwa kwenyika.
Hurongwa hweKumisa Basa Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, Hotsviriridza
Vanhu vazhinji pasi rose vari kutarisa zvichabuda pakurudziro iri kuitwa nebato reDemocratic Party yekuti mutungamiri weAmerica, Va Donald Trump, vamiswe pamberi pedare vachitongwa uye vasiye basa mushure mekukurudzira vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga svondo rapera